सूटकेस बिना यात्रा गर्न कारणहरू यात्रा समाचार
जाँच नगरिएको झोला बिना यात्रा गर्नु आनन्दको कुरा हो, तपाई जेसुकै हेर्नुहोला पनि। सुरुमा, केवल हात सामानको साथ यात्रा गर्दा तपाईं हल्का र बढी सहज महसुस गर्नुहुन्छ, यो बिर्सनुहुन्न कि यसले हामीलाई प्रतीक्षा समय, पैसा र अनावश्यक असुविधाहरू बचत गर्न अनुमति दिन्छ किनकि सुटकेस हराउने छैन।
हामीलाई थाहा छ कि सुटकेस नजोक्न गाह्रो हुन सक्छ किनकि यसले यात्राको क्रममा हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने बारे शंका र असुरक्षा उत्पन्न गर्दछ, तर त्यहाँ सुटकेस बिना यात्रा गर्नुपर्ने धेरै कारणहरू छन्। तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो कसरी सफल छ।
1 गतिशीलता बढ्यो
2 कम चिन्ताहरू
3 तपाईं समय बचत हुनेछ
4 पैसा पनि
4.1 लाइटर यात्रा कसरी गर्ने?
4.1.1 जुत्ता र लुगा
4.1.2 मेकअप ब्याग
4.1.3 डिजिटल उपकरणहरू
4.1.4 फोटो क्यामेरा
4.1.5 राम्रोसँग प्याक गर्नुहोस्
ठुलो र भारी सूटकेस वा सानो प्याकेजको ढेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु वास्तवमै कष्टकर छ। सामान बोक्नु भन्दा खराब कुनै चीज छैन किनकि यसले गतिशीलतालाई घटाउँछ, तपाईंले आफ्नो सामानहरू माथि र तलतिर जानको लागि तान्नु पर्छ, घुम्ने ठाउँहरू पार गर्नुपर्नेछ, सार्वजनिक यातायातमा ठाउँ खोज्नुहोस् ...
ठूला सूटकेसहरू बिना यात्रा गर्दा यी सबै विघ्नहरू हराउँदछन् र सडकमा यात्रा गर्दा, एयरपोर्टको माध्यमबाट वा ट्रेन वा बस प्रयोग गर्दा तपाईंको गन्तव्यमा पुग्दा तपाईं हल्का महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईं अधिक गतिशीलता को आनन्द उठाउनुहुनेछ।
यदि तपाइँ यात्रा गर्दा धेरै सुटकेसहरू बोक्नुहुन्छ भने, तपाइँको ध्यान उनीहरूको सबै समयमा केन्द्रित गर्न र उनीहरू कहाँ छन् भनेर जान्न गाह्रो हुन्छ। बस, रेल वा एयरपोर्ट स्टेशनहरूमा सँधै धेरै आवागमन हुन्छ र मान्छेहरू, जुन हाम्रो सामानको लागि अझ ठूलो जोखिम हो।
सार्वजनिक स्थानहरूमा सँधैं मानिसहरू छन् जसले हामीलाई एउटा ठूलो टाउको दुखाइ दिन सक्ने एउटा रसीला लुटको लागि ओभरसेप्टको फाइदा लिन इच्छुक छन्। तर यदि तपाईं एकल क्यारी-अ su्क सूटकेस गर्नुहुन्छ भने तपाईं यसलाई अझ राम्रोसँग मोनिटर गर्न सक्षम हुनुहुनेछ दुबै एयरपोर्ट वा स्टेशनमा, साथै प्लेन वा ट्रेन भित्र।
तपाईं समय बचत हुनेछ
केवल क्यारी-अन्ड सुटकेसको साथ यात्रा गरेर, तपाईको सामान जाँच गर्न लाम लाग्नु पर्दैन, किनकि तपाईं विमानस्थलमा जान सक्नुहुन्छ र सिधा सुरक्षा नियन्त्रणमा जान सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईले बेल्टमा सुटकेसहरू संकलन गर्न कुर्नु पर्दैन किनकि तपाईं आफैंमा लैजानुहुन्छ। र के यो यदि धेरै उडानहरू एकै समयमा आइपुगे, हामी एक राम्रो र थकाउने समय पर्खन सक्छौं ...
यात्रा गर्दा यदि तपाईं सुटकेसहरू बिना यात्रा गर्नुहुन्छ, केवल एक क्यारा-अन सूटकेसको साथ, तपाईं पैसा बचत गर्नुहुनेछ किनकि तपाईं आफ्नो सबै सामान ढुवानी गर्न ट्याक्सीको लागि भुक्तान गर्नुपर्दैन। साथै, तपाईले चेक इन गर्न आवश्यक पर्दैन त्यसैले तपाईलाई थप सामानको लागि भुक्तान गर्नु पर्दैन।
र पक्कै पनि जब ठूला सूटकेसहरू बिना यात्रा गर्दा तपाईले धेरै खरीदहरू गर्नुहुने छैन किनभने त्यसो त तपाईंसँग कहाँ भण्डार गर्ने छैन। यसले अधिक वजनको समस्यालाई पनि हटाउँछ।
लाइटर यात्रा कसरी गर्ने?
लग्गेज तयारी गर्दा यो सामान्य कुरा हो कि हामी यात्राको क्रममा हामीलाई चाहिएको धेरै चीजहरू हामीसँग लैजान चाहन्छौं: कपडा, जुत्ता, प्राथमिक उपचार किट, इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू, इत्यादि। तर वास्तविकता के हो भने हामीलाई जस्तोसुकै सोच्न पनि हामीलाई आवश्यक पर्दैन।
जुत्ता र लुगा
कुञ्जी भनेको हाम्रो यात्राको क्रममा हामीले गर्नुपर्ने गतिविधिहरूको बारेमा सोच्नको लागि हो जुन हामीलाई कार्य र रणनीतिक तरिकाले चाहिन्छ भन्ने छनौट गर्दछ। एक अर्कासँग मिल्ने कपडाहरू छनौट गर्नुहोस्, त्यसोभए तपाईं आफ्नो शैलीहरू गुणा गर्नुहुनेछ र तपाईं तिनीहरूलाई सजिलैसँग विभिन्न परिस्थितिहरूमा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफैंमा संलग्न भएको पाउनुहुन्छ। जुत्ताको साथ पनि त्यस्तै हुन्छ।
कुञ्जी भनेको कम लिनु हो र लुगा धुने क्रममा लुगा धुने वा तपाईं बस्नुभएको होटेलको लुगा धुने सेवा प्रयोग गरेर धुनु पर्दछ।
यदि तपाइँ तपाइँको यात्रा को लागी एक होटल मा रहन जाँदैछन्, तपाइँको निश्चय पक्कै एक सानो स्वागत शौचालय हुनेछ उत्पादनहरू जस्तै साबुन, टुथपेस्ट, कंघी, शैम्पू, जेल, ऊतकहरू, र अन्य चीजहरूमा। तपाईंले यसलाई घरबाट लिन आवश्यक पर्दैन किनकि यसले तपाईंको क्यारी-अनमा धेरै ठाउँ लिनेछ।
तपाईंले आफ्नो संगीत प्लेयर, ल्यापटप, ट्याब्लेट र खेल कन्सोल तपाईं सँगै लिनु हुँदैन, साथै सबै चार्जरहरू पनि। तपाईंको स्मार्टफोनको साथ यो पर्याप्त हुनेछ। र, कम सामान तपाईं बोक्नुहुन्छ, कम तपाईं हराउन सक्नुहुन्छ र हल्का तपाईं जानुहुनेछ।
यात्रा प्रकाशको विचारको साथ, सब भन्दा सुविधाजनक मोबाइल क्यामेरा वा एक एसएलआर भन्दा कम्प्याक्ट क्यामेरा हो। र यदि तपाइँ एसएलआर क्यामेरा लिने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाइँ एक लेन्स मात्र छान्नुहुन्छ भने राम्रो।
राम्रोसँग प्याक गर्नुहोस्
सूटकेस कसरी प्याक गर्ने भनेर कसरी जान्ने यो अविश्वसनीय हो, सबै ठाउँको फाइदा लिई र अत्यावश्यक सामानहरू ले हामीलाई हल्का यात्रामा मद्दत गर्दछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, ठूला सूटकेस बिना यात्रा गर्नु, केवल ह्यान्डहेल्डको साथ बढी सहज हुन्छ, बढी गतिशीलता दिन्छ, लुट्ने सम्भावना कम छ, यो सस्तो छ र हामीलाई लाममा पर्खेर पर्खिने समय बचत गर्न अनुमति दिन्छ। सबै फाइदाहरू हुन्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » सुटकेस बिना यात्रा गर्न कारणहरू